All About Constipation - My Doctor " );( document.contains ) || document.write( "" );( window.DOMRect ) || document.write( "" );( window.URL && window.URL.prototype && window.URLSearchParams ) || document.write( "" );( window.FormData && window.FormData.prototype.keys ) || document.write( "" );( Element.prototype.matches && Element.prototype.closest ) || document.write( "" );( "objectFit" in document.documentElement.style ) || document.write( "" );
တဈပတျလြှငျ ဝမျးသှားတဲ့အကွိမျရေ ၃ကွိမျအောကျလြော့နညျးတာ
(1)ရမြေားမြားသောကျပါ။(တဈနလြေှ့ငျအနညျးဆုံး ရေ ၂လီတာသောကျပါ။)
(1)ဝမျးခြုပျတာနဲ့အတူ ဗိုကျထိုးအောငျ့လာမယျ၊ဝမျးလညျးခြုပျသလို လလေညျးမလညျတော့ဘူးဆိုလြှငျ
(2)ဝမျးခြုပျနပွေီး ဝမျးသှားတဲ့အခါမှာလညျး သှေးပါလြှငျ
(5)အပျေါမှာပွောထားတဲ့ ဝမျးခြုပျလြှငျလုပျရမယျ့ နညျးလမျးတှအေတိုငျး လိုကျနာတာတောငျမှ ဝမျးခြုပျမွဲခြုပျဆဲဖွဈနလြှေငျ….
နီးစပျရာဆေးရုံ၊ဆေးခနျးမှာ ဆရာဝနျနဲ့အမွနျဆုံး သှားရောကျပွသပွီး လိုအပျတဲ့ စဈဆေးကုသမှုခံယူပါ။
(10)အခြို့သောဆေးတှရေဲ့ ဘေးထှကျဆိုးကြိုးအနနေဲ့လညျး ဝမျးခြုပျစတေတျပါတယျ(ဥပမာ – သံဓာတျအားဆေး၊စိတျကရြောဂါကုသရာတှငျသုံးသောဆေးမြား၊မူးယဈဆေးပါဝငျသောဆေးမြား)
(11)ဝမျးပြော့ဆေးမြားကို အလှနျအကြှံသုံးစှဲမိပါကလညျး ဝမျးခြုပျခွငျးကိုဖွဈစတေတျပါတယျ။
(12)ကယျလျစီယမျ၊အလူမီနီယမျပါဝငျသော အစာခအြေကျဆဈကို ခဖြေကျြပေးသော အစာအိမျဆေးမြား
ဝမျးခြုပျတာကွာလာတာနဲ့အမြှ ဒီလို မလိုလားအပျတဲ့ နောကျဆကျတှဲ ရောဂါတှဖွေဈလာနိုငျပါတယျ။
(1)လိပျခေါငျးရောဂါ (ဝမျးသှားရငျ သှေးပါမယျ၊အရမျးနာမယျ စတဲ့လက်ခဏာတှပွေနိုငျ ပါတယျ။)
(2)စအိုဝကှဲထှကျခွငျး (စအိုဝတဈဝိုကျမှာ ကှဲကွောငျးလေးတှဖွေဈမယျ၊ယားမယျ၊နာမ.ျ၊သှေးထှကျမယျ စတဲ့လက်ခဏာတှပွေနိုငျပါတယျ။)
(3)စမွငျးခံခွငျး (ဝမျးခြုပျတဲ့အခြိနျအရမျးကွာလာတဲ့အခါ အထဲကဝမျးတှဟော အရမျးကိုမာခဲပွီး အူမကွီးနဲ့အစာဟောငျးအိမျထဲမှာ ပိတျဆို့နကော ဘယျလောကျညှဈညှဈ ဝမျးမသှားနိုငျဖွဈတာကို စမွငျးတုံးခံတယျလို့ ပွောကွတာပါ။)
(4)စအိုအပွငျသို့ထှကျကခြွငျး (ဝမျးသှားတိုငျး အားနဲ့ညှဈသှားရတဲ့အခါ ခန်ဓာကိုယျတှငျးက ဖိအားတှမြေားလာပွီး စအိုကိုပါအပွငျဘကျကို တှနျးခသြလိုဖွဈပွီး စအိုအပွငျဘကျထှကျလာတာပါ။)
တစ်ပတ်လျှင် ဝမ်းသွားတဲ့အကြိမ်ရေ ၃ကြိမ်အောက်လျော့နည်းတာ
(1)ရေများများသောက်ပါ။(တစ်နေ့လျှင်အနည်းဆုံး ရေ ၂လီတာသောက်ပါ။)
(1)ဝမ်းချုပ်တာနဲ့အတူ ဗိုက်ထိုးအောင့်လာမယ်၊ဝမ်းလည်းချုပ်သလို လေလည်းမလည်တော့ဘူးဆိုလျှင်
(2)ဝမ်းချုပ်နေပြီး ဝမ်းသွားတဲ့အခါမှာလည်း သွေးပါလျှင်
(5)အပေါ်မှာပြောထားတဲ့ ဝမ်းချုပ်လျှင်လုပ်ရမယ့် နည်းလမ်းတွေအတိုင်း လိုက်နာတာတောင်မှ ဝမ်းချုပ်မြဲချုပ်ဆဲဖြစ်နေလျှင်….
နီးစပ်ရာဆေးရုံ၊ဆေးခန်းမှာ ဆရာဝန်နဲ့အမြန်ဆုံး သွားရောက်ပြသပြီး လိုအပ်တဲ့ စစ်ဆေးကုသမှုခံယူပါ။
(10)အချို့သောဆေးတွေရဲ့ ဘေးထွက်ဆိုးကျိုးအနေနဲ့လည်း ဝမ်းချုပ်စေတတ်ပါတယ်(ဥပမာ – သံဓာတ်အားဆေး၊စိတ်ကျရောဂါကုသရာတွင်သုံးသောဆေးများ၊မူးယစ်ဆေးပါဝင်သောဆေးများ)
(11)ဝမ်းပျော့ဆေးများကို အလွန်အကျွံသုံးစွဲမိပါကလည်း ဝမ်းချုပ်ခြင်းကိုဖြစ်စေတတ်ပါတယ်။
(12)ကယ်လ်စီယမ်၊အလူမီနီယမ်ပါဝင်သော အစာချေအက်ဆစ်ကို ချေဖျက်ပေးသော အစာအိမ်ဆေးများ
ဝမ်းချုပ်တာကြာလာတာနဲ့အမျှ ဒီလို မလိုလားအပ်တဲ့ နောက်ဆက်တွဲ ရောဂါတွေဖြစ်လာနိုင်ပါတယ်။
(1)လိပ်ခေါင်းရောဂါ (ဝမ်းသွားရင် သွေးပါမယ်၊အရမ်းနာမယ် စတဲ့လက္ခဏာတွေပြနိုင် ပါတယ်။)
(2)စအိုဝကွဲထွက်ခြင်း (စအိုဝတစ်ဝိုက်မှာ ကွဲကြောင်းလေးတွေဖြစ်မယ်၊ယားမယ်၊နာမ.်၊သွေးထွက်မယ် စတဲ့လက္ခဏာတွေပြနိုင်ပါတယ်။)
(3)စမြင်းခံခြင်း (ဝမ်းချုပ်တဲ့အချိန်အရမ်းကြာလာတဲ့အခါ အထဲကဝမ်းတွေဟာ အရမ်းကိုမာခဲပြီး အူမကြီးနဲ့အစာဟောင်းအိမ်ထဲမှာ ပိတ်ဆို့နေကာ ဘယ်လောက်ညှစ်ညှစ် ဝမ်းမသွားနိုင်ဖြစ်တာကို စမြင်းတုံးခံတယ်လို့ ပြောကြတာပါ။)
(4)စအိုအပြင်သို့ထွက်ကျခြင်း (ဝမ်းသွားတိုင်း အားနဲ့ညှစ်သွားရတဲ့အခါ ခန္ဓာကိုယ်တွင်းက ဖိအားတွေများလာပြီး စအိုကိုပါအပြင်ဘက်ကို တွန်းချသလိုဖြစ်ပြီး စအိုအပြင်ဘက်ထွက်လာတာပါ။)